नेपाललाई अन्तर्राष्टिय जगतमा परिचय गराऔं « A Nepali passion for cricket
« मेरो बारेमा
Congratulation on being the winner »
नेपाललाई अन्तर्राष्टिय जगतमा परिचय गराऔं
Posted by Prabin the सोभित on बिहिवार, अगस्ट 16, 2007
विगत केही समय देखि विभिन्न पत्रपत्रिका मार्फत अनि इमेलहरुबाट आव्हान गरिदै आएको नेपाललाई चिनाउने अभियानलाई हामी पनि नेपाली भएको नाताले सहयोग गर्नु पर्ने मैले ठानेको छु। तसर्थ यहाँहरुलाई पनि सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछु। केही समय अघि http://www.natural7wonders.com/ ले विश्वका नयाँ सात आश्चार्यको घोषणा गरेको थियो र फेरि अब विश्वका सात प्राकृतिक आश्चार्यको घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसको लागि पहिलो प्रक्रियाका रुपमा अहिले मतदान भइरहेको छ। यसर्थ यस मतदानमा हामीले हाम्रो सगरमाथा लगायत अन्य ठाँउहरुलाई समावेस गर्न सके नेपाललाई विश्वमा परिचित गराउन सकिन्थ्यो। यसरी हाम्रो ठाँउहरुलाई पनि सात मध्येमा पार्न सके यो नेपालका लागि अमूल्य सहयोग हुनेछ। तसर्थ साथीहरु हो यस अभियानमा हामी पनि जुटौं।
भोट दिन यस साइटमा जाऔं http://www.natural7wonders.com/index.php?id=637
जहाँ तपाईं सातवटा ठाँउहरुलाई मनोनयन गर्नसक्नु हुन्छ। जसमा यी ठाँउहरुलाई लेख्नु भएमा हामी सबैको एकै किसिम भै छनौटमा पार्न सकिन्छ ।
यी ठाँउहरु हुन:
1. Sagarmatha National Park …………… National Park
2. Kaligandaki Valley, Deepest Gorge of world……………Canyon
3. Lomangthang, Upper Mustang…………… Prehistoric Natural
4. Geology of Kaligandaki River……………….Geological Site
5. Fish Tail Mountain(Machhapurachhe)…….Mountain
6. Rara Lake, Mugu…………………Lake
7. Thorang-la Pass, Mustang-Manang…………..Mountain
Submit गरी सके पछि एक email तपाईंलाई आउने छ जसमा भनिएको ठाँउमा click गरेपछि मात्र तपाईंको मत दर्ता हुनेछ।
This entry was posted on बिहिवार, अगस्ट 16, 2007 at 9:15 अपराह्न	and is filed under समाचारहरु.